Volocopter Chengdu: Shirkad cusub oo iskaashi oo Jarmal iyo Shiinaha ah ayaa lagu dhawaaqay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Volocopter Chengdu: Shirkad cusub oo iskaashi oo Jarmal iyo Shiinaha ah ayaa lagu dhawaaqay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Jarmalka Jebinta Wararka • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
UAM waxaa loola jeedaa qaab cusub oo gaadiidka magaalada ah kaas oo adeegsada diyaaradaha korontada ka soo degaya iyo soo degaya (eVTOL) si loogu raro dadka ama badeecadaha gudaha hawada hoose ee magaalooyinka iyo nawaaxigeeda. Waxay gacan ka geysaneysaa yareynta culeyska waddooyinka magaalada oo aad u ciriiri ah waxayna u oggolaaneysaa dadka iyo badeecadaha inay si dhaqso leh oo ammaan ah u gaaraan goobahooda.
Volocopter -ka Jarmalka ayaa la kaashanaya Geely Holding Group si ay iskaashi uga sameeyaan Chengdu, Shiinaha.
Iskaashigu wuxuu mas'uul ka noqon doonaa wax soo saarka iyo hawlgalka suuqa ee alaabta Volocopter ee suuqa Shiinaha.
Wadajirku wuxuu qorshaynayaa inuu gacan ka geysto kor u qaadista dhaqdhaqaaqa hawada magaalooyinka ee Shiinaha saddexda illaa shanta sano ee soo socota.
Shirkad cusub oo diyaaradeed oo wada jir ah, oo lagu magacaabo Volocopter (Chengdu) Technology Co., Ltd., ama Volocopter Chengdu marka la soo koobo, ayaa waxaa ku dhawaaqay Volocopter-ka Jarmalka, oo ku takhasusay soo saaridda gaadiidka hawada ee iskii u shaqeeya, iyo qeybta labaad ee Geely Holding Koox.
Mashruucan wadajirka ah wuxuu ka dhici doonaa Chengdu, oo ah caasimadda koonfur -galbeed ee gobolka Sichuan ee Shiinaha, wuxuuna mas'uul ka noqon doonaa wax -soo -saarka iyo ka -shaqaynta suuqa alaabooyinka Volocopter ee suuqa Shiinaha.
Volocopter Chengdu ayaa sidoo kale Volocopter la saxiixday amaro 150 diyaaradood, oo ay ku jiraan gaadiidka saadka ee aan duuliyaha lahayn iyo diyaaradaha dadka.
Gawaarida hawada iyo qeybahooda waxaa lagu soo saari doonaa Hubei Geely Terrafugia, oo ah saldhig wax soo saarka Geely ee Shiinaha, sida laga soo xigtay iskaashiga.
Volocopter Chengdu ayaa sidoo kale ka qeyb geli doonta Bandhigga 13 -aad ee Duulimaadyada Caalamiga ah ee Shiinaha iyo Aerospace (Airshow China) 28 -ka September.
Florian Reuter, oo ah madaxa shirkadda Volocopter.
Volocopter hadda waa soo -saaraha dayuuradaha ee ugu horreeya oo keliya eVTOL oo ka helay oggolaanshaha naqshadeynta iyo wax -soo -saarka Midowga Yurub ee Badbaadada Duulista Hawada.